Lawula imifanekiso yakho yoqhakamshelwano neMifanekiso yoQhakamshelwano yoGcino | Ndisuka mac
Ngokuqinisekileyo ngaphezu komnye kuni basebenzise ukubakho kwe yongeza imifanekiso kubafowunelwa bakho, ukwenza kube lula ukuchonga xa ufumana umnxeba, ukuyenza okanye ukugcina ubuso obuhambelana negama. Ngokusebenzisa iMac okanye ngokuthe ngqo nge-iPhone sinokongeza okanye sicime imifanekiso esifuna ukukhapha abafowunelwa, kodwa ngelishwa asinakho ukwenza ikopi yogcino lwemifanekiso ebesikhe sayisebenzisa ngaphambili. Ngethamsanqa enkosi kwiVenkile ye-Mac App sinokusebenzisa usetyenziso ukubakhupha kubafowunelwa.
Ukuba asihlali sihlaziya iifoto zabafowunelwa bethu, kusenokwenzeka ukuba ekuhambeni kwexesha sinesidingo sokufumana nayiphi na imifanekiso esiyisebenzisayo kunxibelelwano lwethu. Okanye sifuna ukuvuselela bonke abo sidibene nabo ekunxibelelaneni nabo kwisitrato kwaye sibatshintshele abanye. Eyogcino Imifanekiso yoQhakamshelwano ivumela ukuba sikwazi ukulawula zonke iifoto ezinxulumene nabafowunelwa bethu, nokuba sizikhuphe, sabele imifanekiso emitsha okanye ucime imifanekiso nganye ehambelana nabafowunelwa.
1 Iimpawu zoQhakamshelwano lweeMifanekiso
1.1 Khipha imifanekiso kubafowunelwa
1.2 Nika imifanekiso yoqhakamshelwano
1.3 Cima imifanekiso kubo bonke abafowunelwa
Iimpawu zoQhakamshelwano lweeMifanekiso
Khipha imifanekiso kubafowunelwa
Lo msebenzi uyasivumela khipha imifanekiso kubo bonke abafowunelwa ezinomfanekiso onxulumene noko kwaye uzigcine kulawulo kwi-Mac yethu.
Nika imifanekiso yoqhakamshelwano
Nika imifanekiso kubafowunelwa Umntu ngamnye inokuba ngumsebenzi odinisayo nothatha ixesha. Esi sicelo sisivumela ukuba siyenze en bloc. Kufuneka sisebenzise igama lomfowunelwa egameni lefayile apho sifuna ukudibanisa umfanekiso. Backup Imifanekiso yoQhakamshelwano iya kuwufezekisa ngokukhawuleza lo msebenzi kwimizuzwana embalwa.
Cima imifanekiso kubo bonke abafowunelwa
Ukuba sifuna cima yonke imifanekiso kunye, Imifanekiso yoQhakamshelwano yokuNxibelelana ikwasinika olu khetho, ukhetho olufanelekileyo ukuba sifuna ukuvuselela yonke imifanekiso yabafowunelwa bethu.
Backup Imifanekiso yoqhakamshelwano iyafumaneka ukhuphelo simahla ngexesha lokupapasha eli nqaku, indlela elungileyo eya kusivumela ukuba sihlaziye ngokukhawuleza imifanekiso yoqhakamshelwano lwethu. Ixabiso laso eliqhelekileyo kwiVenkile ye-Mac App yi-1,99 euro.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » Iinkqubo zeMac » Lawula imifanekiso yakho yoqhakamshelwano neMifanekiso yoQhakamshelwano